ओली हिमालय एयरलाइन्सबाटै किन चीन प्रस्थान गरे त ?
राम जीवन महतो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चिनीया समकक्षी ली खछयाङको निमन्त्रनामा चैत्र ७ गते भ्रमणका लागि उत्तरी छिमेकी चीन प्रस्थान गरे । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहरा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहितको जम्बो टोली राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सट्टा उडान नै सुरु नगरेको निजि कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सबाट प्रस्थान गर्दा चर्चाको विषय बन्न पुग्यो ।
मुुलुकको एजेण्डा सेटर र सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरे । नेपाल एयरलाइन्सका वरिष्ठ क्याप्टेन तथा कलाकार विजय लामाको फेसबक स्टाटस मार्फत गरेको गुनासो चर्चाको शिखरमा रह्यो । उनले लेखेका छन्, “ के बस्नु यस्तो देशमा जुन देशमा नेताहरुले राष्ट्रियध्वजाको कदर गर्न जान्दैनन् । धिक्कार छ आफ्नो कर्मलाई यस्तो अवस्थामा आउँदा पनि केहि गर्न नसक्दा । कहिलेसम्म हेर्नुपर्छ यस्ता कुराहरु ? कहिलेसम्म सहनुपर्छ हामीले यी सबै पिडाहरु । राष्ट्र र नेपालीहरुलाई माया गर्ने नेताहरु कहिले आउलान् ? भन्नु केही छैन अब न कि कसैलाई दोष नै दिनु । हामी त सिर्फ ट्वाल्ल परेर हेर्ने मात्र हो । हैन त साथीहरु ?”
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइ फेसबुकमा लेखेका छन्, “ आज चैत्र ७ गतेबाट शुरु भएको प्रम ओलीको चीन भ्रमन शुभ रहोस्, सफल रहोस् । परन्तु भुकम्प र नाकाबन्दीले थिल्थिलो भएको देशको नाजुक अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिने गरी सय जनाको जम्बो टोली लैजानु र सार्वजनिक स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सका जेट विमान छँदाछदै सञ्चालनमा आइनसकेको निजी क्षेत्रको विमान चार्टर गरेर जानु चाहिँ अलि बढी ज्यादतिपूर्ण र अशोभनीय नै भयो है ।”
त्यस्तै पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल र सचिव पे्रम राइ पनि यसले जनता सामु नराम्रो सन्देश जाने भनी अन्तुष्टि पोखे ।
आखिर प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहदामा बसेको ओली किन लिए त यस्तो निर्णय ? सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान नेपाल एयरलाइन्स असक्षम भएकै कारणले निजी विमान रोजेका हन् त ? के हिमालय एयरलाइन्स पूर्ण रुपमा उडान भर्न सक्षम थियो त ?
वास्तवमा हिमालय एयरलाइनसका धेरै नै तृटीहरु छन् । परिक्षण उडान भरिसके पछि व्यावसायिक उडान पूर्व गर्नु पर्ने उडानलाई पुभिङ फ्लाइट भनिन्छ, जुन अनिवार्य हुन्छ । नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका उप महानिर्देशक राजन पोखरेलको अनसार हिमालय एयरलाइन्सले पुभिङ फ्लाइट गरेकै छैन । पुभिङ फ्लाइट नगरिएको विमान चढी प्रधानमन्त्री चीन प्रस्थान गर्नु रहस्यमय छ ।
दोस्रो कुरा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्नको लागि सम्बन्धित देशहरुबाट अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । तर हिमालय एयरलाइन्सले अनुमति नै नलिई चीन उडान भर्नु अमm गैरजिम्मेबार देखिन्छ ।
त्यसै गरी गैरीधारा स्थित हिमालय एयरलाइन्सको कार्यालय मर्मत भैरहनु र कार्यालयमा राख्नु पर्ने जन शक्ति पनि अमmसम्म नराख्नुले पनि हिमालय एयरलाइन्स उडानको लागि पूर्ण रुपले तयार नभएको कुरा पुष्टि गर्छ ।
अर्को कुरा हिमालय एयरलाइन्सले पहिलो अन्तराष्ट्रिय उडान अप्रिल २०१६ मा गर्ने योजना बनाएको थियो । तर योजना भन्दा पहिले नै अर्थात् २० मार्चमा नै अन्तराष्ट्रिय उडान भ–यो । यसका अलावा विमानमा यात्रीको जीवन विमा पनि गरिएको छैन ।
यसरी उडान भर्न पूर्ण रुपले असुरक्षित हुँदा हँदै पनि सुरक्षाको कुनै ख्यालै नगरी किन गरे त यस्तो निर्णय ओलीले ? यसको कारण यस्तो रहेको छ ।
हिमालय एयरलाइन्सका वोर्ड अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा प्रधानमन्त्री ओली सम्बद्घ दल नेकपा एमाले निकट व्यवसायी हुन् । प्रधानमन्त्री निजी विमानमा उढ्दा हिमालय एयरलाइन्स कम्पनिको प्रचार हुने भएकोले ओलीले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
यसरी निजी र पार्टीगत सम्बन्धको स्वार्थमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अपमान गरेर कम्पनिको प्रमोशनको लागि देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो कदम उठाउनु अशोभनीय र निन्दनीयपूर्ण कार्य हो । यही नै हाम्रो देश र जनताको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । जब सम्म यस्ता नेताहरु हम्रो देशमा रहिरहन्छ देशको विकास कदापि हुन सक्दैन ।